Ukushumayela ENtshona Java Nebali Lomqwazi KaPopu | Imbali YaseIndonesia
Ngo-1933, uFrank Rice wacela uTheodorus (uTheo) Ratu, inzalelwane yakuMntla weSulawesi, ukuba aye kuncedisa kwindawo egcina iincwadi eJakarta. UTheo uthi: “Ndaba nomdla kakhulu kulo msebenzi woBukumkani ubalulekileyo ndaza ndaqalisa ukushumayela noMzalwan’ uRice. Ekuhambeni kwexesha ndahamba noBill Hunter saya kushumayela kulo lonke elaseJava ndaza kamva ndahamba nabazalwana ababesebenzisa isikhephe iLightbearer saya eSumatra.” UTheo waba ngowokuqala ukwamkela inyaniso eIndonesia, waza wanguvulindlela eJava, kuMntla weSulawesi naseSumatra iminyaka emininzi.
Kunyaka olandelayo, uBill Hunter wanika uFelix Tan, umfundi owayehlala eJakarta, incwadana ethi Bapina Abafileyo? Xa wabuyela kowabo eBandung, kwiNtshona yeJava, uFelix wabonisa umninawa wakhe, uDodo, le ncwadana. Xa babefunda loo ncwadana bamangaliswa kukuba umntu wokuqala, uAdam, wayengenamphefumlo ongafiyo, kodwa wayengumphefumlo. (Gen. 2:7) Baya besiba nomdla wokufunda ngoThixo, kangangokuba baya kukhangela iincwadi zeWatch Tower kwindawo ethengisa iincwadi esele zisetyenzisiwe eBandung. Baxelela abantu bakowabo ngezinto abazifundileyo. Emva kokuba befunde zonke iincwadi neencwadana abazifumanayo, babhalela kwindawo egcina iincwadi eJakarta. Bothuswa kukufika kukaFrank Rice, ebaphathele iincwadi ezintsha.
Kungekudala emva kokuba uMzalwan’ uRice ebuyele eJakarta, uClem noJean Deschamp ababesandul’ ukutshata baya eBandung baza bahlala iintsuku eziyi-15. UFelix uthi: “UMzalwan’ uDeschamp wasibuza ukuba siyafuna na ukubhaptizwa. Abane kuthi—mna, uDodo, udadewethu omncinci, uJosephine (uPin Nio) nomama, uKang Nio—sabhaptizwa.” * Emva kokuba bebhaptiziwe, bahamba noClem kunye noJean baya kushumayela iintsuku ezisithoba. UClem wababonisa indlela yokushumayela esebenzisa ikhadi lokushumayela elalinentshumayelo elula yeBhayibhile, ebhalwe ngeelwimi ezintathu. Kungabanga thuba lide iqela elincinane laseBandung laba libandla lesibini eIndonesia.
Njengoko umsebenzi wokushumayela wawusiya utyhalela phambili, abefundisi beNgqobhoko baqalisa ukuphawula ukuba kukho amaNgqina kaYehova. Bona nabantu ababesebenza nabo babhala amanqaku ephephandaba ahlasela iinkolelo nomsebenzi wamaNgqina. Loo manqaku abangela ukuba abasemagunyeni kwiSebe Lemibandela Yezonqulo babize uFrank Rice ukuze bamhlohle ngemibuzo. Baneliseka ziimpendulo zakhe, baza bathi umsebenzi mawuqhubeke. *
Ekuqaleni kweminyaka yoo-1930, abaninzi kwabasemagunyeni babengayihoyanga into yokushumayela kwamaNgqina okanye babewanyamezela. Kodwa xa kwaqalisa ukuphatha amaNazi eYurophu, amanye amagosa karhulumente, ngokukodwa lawo ayengamaKatolika, aqalisa ukuchasa. UClem Deschamp uthi: “Elinye igosa elihlola impahla engena ngeenqanawa elalingumKatolika lathimba iincwadi zethu ezazifika ngenqanawa kuba lisithi azithethi kakuhle ngamaNazi. Xa ndaya kukhalaza kwiSebe Lezinto Ezingenayo, ela gosa lingenabubele lalikwiholide. Igosa elinobubele nelingengomKatolika elalisebenza endaweni yalo lakhawuleza lasinika iincwadi zethu, lathi, ‘Thathani zonke eninokukwazi ukuzithatha ngoku lingekafiki eli gosa lisebenza apha!’”
UJean Deschamp uthi: “Ngenye imini, amagosa asinyanzela ukuba sicime imifanekiso emibini ekwincwadi yesiNgesi ethi Enemies. Ayengafuni umfanekiso wenyoka (uSathana) enxibe umnqwazi kapopu nepenapenayo ziintlungu, kunye nehenyukazi elinxilileyo (unqulo lobuxoki) elinxibe kwalo mnqwazi. * Sasizimisele ukuyihambisa le ncwadi. Ngoko sobathathu sahlala ezibukweni kwindawo eyayitshisa kakhulu, sacima yonke loo mifanekiso yayinomnqwazi kapopu kwezo ncwadi zazininzi ngokwenene!”
Imifanekiso emibini ekwincwadi yesiNgesi ethi Enemies eyayingafunwa ngabasemagunyeni
Njengoko yayisondela imfazwe eYurophu, iincwadi zethu zaqhubeka zibhenca uhanahaniso lweNgqobhoko nokuzifaka kwayo ngempumlo kwiipolitiki. Bona abefundisi babanyanzela ngakumbi abasemagunyeni ukuba bayekise umsebenzi wethu, ngenxa yoko iincwadi zethu ezininzi zayekiswa.
Sekunjalo, abazalwana babezimisele ukuqhubeka nomsebenzi, ngoko babeprinta iincwadi ngomatshini abawufumana eOstreliya. (IZe. 4:20) Echaza enye yeendlela ababezisebenzisa, uJean Deschamp uthi: “Xa siprinte incwadana okanye imagazini entsha, kwakufuneka siyise kwabasemagunyeni ukuze sifumane imvume yokuyihambisa. Sasiprinta size sisasaze iincwadi isaqala iveki. Ekupheleni kweveki, sasiye sise enye yezo ncwadi kwiofisi yegqwetha likarhulumente. Xa lingayamkeli loo ncwadi, sasiye sinikine iintloko sidanile size sikhawuleze siye kuprinta ezinye iincwadi.”
Abazalwana noodade ababehambisa iincwadi ezingavumelekanga babeye bazifihle xa kuvela amapolisa. Ngokomzekelo, xa babeshumayela eKediri, kwiMpuma yeJava, engaqondanga uCharles Harris wadibana nomphathi wamapolisa.
Lo mphathi wathi: “Kudala ndinifuna. Yima kancinci, ndifuna ukukhangela into ezibhalwe kuyo iincwadi zenu eningamele nizihambise.”
UCharles uthi: “Ngoxa wayekhangela into ezibhalwe kuyo ezo ncwadi endlwini yakhe, ndaqhusheka ezo singavumelekanga ukuzihambisa epokothweni yedyasi. Xa ebuya, ndamnika iincwadana eziyi-15 esasivumelekile ukuba sizihambise. Wandinika umnikelo ekrikriza, ndaza ndahambisa iincwadi ezingavumelekanga xa sele ndikudana kuye.”
Xa kwakugquba iMfazwe Yehlabathi II eYurophu, zazingasekho iincwadi ezazisiza ngesikhephe zivela eNetherlands. Noko ke, abazalwana bayibona isekude ingxaki baza ngobulumko balungiselela ukuba inkampani yabucala iprinte iimagazini eJakarta. IConsolation (ngoku enguVukani!) yokuqala eyapapashwa ngesi-Indonesia yayiyekaJanuwari 1939, yaza yona IMboniselo yapapashwa kungekudala emva koko. Abazalwana bathenga umatshini omncinane baza baziprintela iimagazini. Ngo-1940, bafumana umatshini omkhulu wokuprinta eOstreliya baza baprinta iincwadana neemagazini zesi-Indonesia nezesiDatshi. Iindleko zaloo msebenzi zaziphuma kwiipokotho zabo.
Kufika umatshini wokuqala wokuprinta kwindawo yokugcina iincwadi eJakarta
Ekugqibeleni, ngoJulayi 28, 1941, abasemagunyeni baziyekisa zonke iincwadi zeWatch Tower Society. UJean Deschamp uthi: “Ndathi ndisachwetheza eofisini kwambonzeleka amapolisa amathathu ehamba nomphathi wawo ongumDatshi owayenxibe iyunifomu epheleleyo. Zange sothuke kuba kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo sasivile ukuba iincwadi zethu ziza kuyekiswa. Lo mphathi wasifundela umyalelo omde waza wafuna simse kwindawo esiprinta kuyo ukuze awuvale loo matshini. Umyeni wam wamxelela ukuba uthengiswe izolo!”
IBhayibhile yona zange iyekiswe. Ngoko abazalwana baqhubeka beshumayela kwindlu ngendlu besebenzisa iBhayibhile kuphela, beqhuba nezifundo. Kodwa ekubeni kwakusekucaca ukuba imfazwe iyeza eAsia, oovulindlela abasuka kwamanye amazwe kwathiwa mababuyele eOstreliya.
^ isiqe. 1 Kamva, utata kaFelix nabaninawa bakhe abathathu baba ngamaNgqina. Udadewabo uJosephine, watshata noAndré Elias baza baya kwiSikolo seBhayibhile seWatchtower saseGiliyadi. Ibali lakhe lobomi likuVukani! kaSeptemba 2009.
^ isiqe. 1 Emva kweMfazwe Yehlabathi II, uFrank wabuyela eOstreliya waza wakhulisa intsapho. UMzalwan’ uRice wagqiba ikhondo lakhe lasemhlabeni ngo1986.
^ isiqe. 3 Le mifanekiso yayisekelwe kwiSityhilelo 12:9 naku-17:3-6.
EIndonesia: INtshona Java Ivelisa Isiqhamo